Warka - Xafladda furitaanka shirkadda Mersen Zhejiang Co., Ltd. waxaa la qabtay galabtii 5-ta Nofeembar
Xafladii furitaanka shirkadda Mersen Zhejiang Co., Ltd. waxaa la qabtay 5tii Nofeembarth galabnimo. Kuxigeenka xoghayaha ahna madaxa deegaanka ee degmada Changxing Yiting Shi ayaa khudbad jeedisay.
Hadalkeeda, Yiting Shi waxay ku sheegtay in horumarka Changxing had iyo jeer uu jecel yahay libaax qoob-ka-ciyaaraya, oo ay ka buuxdo xamaasad iyo firfircooni, maadaama aan had iyo jeer haysanno dabeecadda "si deeqsinimo leh u furan" oo aan ula hadalno adduunka oo aan u horumarinno si firfircoon. In kasta oo ay saamaysay COVID-19 iyo arrimo kale sannadkan, haddana waxaannu sii wadnay go'aankeenna oo waxaan samaynay dadaalkii ugu weynaa si loo yareeyo saameynta. Saddexda rubuc ee hore, tilmaamayaasha dhaqaale ee Changxing waxay kujireen safka hore gobolka Zhejiang iyo magaalada Huzhou. Guud ahaan 38 mashruuc oo maalgashi shisheeye ayaa la soo bandhigay, waxayna heleen Doolarka Mareykanka 270 milyan oo ah caasimad shisheeye. Dhanka kale xaddiga dhoofinta ayaa kordhay 31%
Yiting Shi wuxuu yiri sanadihii la soo dhaafay, iyadoo ujeedadu tahay in la horumariyo degmo leh jawiga ugu wanaagsan ganacsiga ee Shiinaha, Changxing waxay sameysay dadaal kasta oo lagu abuurayo degmo caalami ah, sharciyeysan oo ku habboon. Waxay si isdaba joog ah u soo jiidatay mashaariic badan oo tayo sare leh gudaha iyo dibaddaba, sida Mersen, Clarios iyo Geely. Sidoo kale Changxing waxay kobcisay shirkado maxalli ah oo heer sare ah oo dakhligoodu ka badanyahay CNY 100 bilyan, sida Tianneng iyo Chaowei. Changxing waxay sii wadi doontaa horumarinta jawi ganacsi oo leh maalgashi iyo ganacsi ku habboon, tartan xalaal ah iyo adeegyo dawladeed oo wax ku ool ah mustaqbalka. Waxay u adeegi doontaa wax soo saarka iyo hawlgalka Merson si kal iyo laab ah, taas oo waxtar u lahaan doonta Mersen inuu noqdo soo saaraha ugu sarreeya adduunka ee fiyuusyada warshadaha. Changxing waxay bixin doontaa isla adeegyo tayo sare leh oo hufan haddii ganacsiyada sare iyo kuwa hoose ee Mersen ay degaan Changxing, taas oo dhiirrigelin doonta horumarinta silsiladda warshadaha isla markaana noqota koox warshadeed sida ugu dhakhsaha badan.
Mersen Zhejiang Co., Ltd. waxaa maal gashaday shirkad faransiis ah oo liis garaysan, oo leh mashiinka wax lagu duro, xarunta mashiinka CNC, khadka wax soo saarka, feer, lathe, mashiinka axdi qarameedka radial universal iyo wax soo saar kale iyo qalab caawiya. Markii la dhammeeyo mashruucan, 37.6 milyan oo qaybood oo koronto ah ayaa la soo saari karaa sanad kasta, qiyaasta waxsoosaarka sanadlaha ahna waa qiyaastii CNY 160 milyan oo ku guuleysan doonta CNY 11.2 milyan oo macaash ah iyo CNY 10.14 milyan dakhli ahaan.